Goobaha Marti-gelinta Barnaamijyada Bilaashka ah iyo kuwa Furan: Ugu wanaagsan 2020 | Laga soo bilaabo Linux
In our qoraal hore oo ku saabsan Furan Hub, waxaan soo sheegnay inay yihiin Goobaha Tusaha Software-ka, oo aan xusno qaarkood, gaar ahaan u heellan Software bilaash ah iyo ilo furan. Qoraalkan waxaan diirada ku saari doonaa Goobaha Martigelinta Barnaamijka (Koodhadhka Marti-gelinta) waxtar u leh bulshadeena, gaar ahaan xilliyada sano 2020.
Caadi ahaan, iyo sidii caadiga ahaydba, qayb wanaagsan oo ka mid ah horumariyayaal iyo isticmaaleyaal horumarsan ama maya, ee Software bilaash ah iyo ilo furan, ogow oo isticmaal qaar ka mid ah kuwan Goobaha Martigelinta Barnaamijka, laakiin runtu waxay tahay in kala-duwanaanta xulashooyinku ay waxyar ka ballaaran yihiin oo ay mudan tahay dhammaantood in la ogaado.
Sida aan ku sharaxnay boostada aan soo sheegnay, Goobaha Martigelinta Barnaamijka Waxay yihiin:
" Domain Websaydhyada taageera ama bixiya aaladda martigelinta furaha, si loogu isticmaalo xakamaynta nooca. Sidan oo kale, si loogu oggolaado horumariyayaashu inay ka wada shaqeeyaan mashaariic badan. Goobahan, gaar ahaan Software-ka Bilaashka ah iyo Isha Furan, waxaa sidoo kale jira goobo badan oo GitHub ka dhex muuqdo, ... ".
2 Meelaha ugu Fiican ee Bilaashka ah iyo Marti-gelinta Barnaamijka
2.1 Bilaash, Furan iyo Bilaash
2.1.7 Kale oo la yaqaan
Sababtoo ah GitHub waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, waxaan soo bandhigi doonaa liis yar oo ka mid ah Goobaha Martigelinta Barnaamijka, labadaba bilaash, bilaash iyo furan, iyo ganacsi, oo noqon kara ikhtiyaar wax ku ool ah oo faa'iido leh oo lagu beddelo GitHub.
Sababtaas awgeed GitHub, inkasta oo uu yahay a madal horumarinta internetka awood leh oo ammaan ah, sidoo kale caan ku ah martigelinta mashaariicda barnaamijyada, iyadoo la adeegsanayo tag sida habka xakamaynta nooca, iyo in la bixiyo martigelinta (keydadka) waayo, mashaariicda furan, iyo softiweerro gaar loo leeyahay (lahaansho iyo / ama ganacsi), tan iyo markii lagu helay Microsoft, qaar badan ayaa iska ilaaliyay isticmaalkeeda waxayna u haajireen goobo kale oo kale.
Sidaa darteed, Goobaha Martigelinta Barnaamijka soo socda ayaa bedel fiican u ah GitHub guri si ay u mashruuc (yada) furan taasi waa lama huraan.
Meelaha ugu Fiican ee Bilaashka ah iyo Marti-gelinta Barnaamijka
Bilaash, Furan iyo Bilaash
Waa hirgelinta il furan oo ah barnaamij been abuur ah, degel maamusha kaydinta koodhka ilaha, warbixinnada cayayaanka, wadahadallada, bogagga wiki, baloogyo, iyo in kabadan wixii mashruuc shaqsiyeed ah. Astaamaha maareynta koodhka ilaha ayaa kuu oggolaanaya inaad la shaqeyso Git iyo SVN. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale isku daraysaa codsiyada, fargeetooyinka, iyo waxyaabo kale oo shaqeynaya. Waxay bixisaa liistada boostada ama golaha ama labadaba qaab isku dhafan oo loogu talagalay wadahadalka furan oo leh nidaam raadraac cayayaanka ah oo wax ku ool ah
Waa degel bixisa hawl socodsiin dhammaystiran oo loogu talagalay qorista, dib u eegista, iyo dirista koodhka. Sidaa darteed, waa bedel aad u fiican, ammaan ah, awood leh oo lagu kalsoonaan karo oo loo yaqaan 'GitHub'. Waxay ka dhigeysaa maareynta keydka koodhka ilaha mid fudud, maadaama loogu talagalay in lagu hagaajiyo socodka shaqada. Astaamaheeda muuqda waxaa ka mid ah bixinta taageerada martigelinta iyada oo loo marayo Git iyo SVN, qaabeynta qaabeynta dejinta ee deegaan kasta, iyo u oggolaanshaha laba nooc oo jawaab celin ah oo u dhexeeya kaqeybgalayaasha, mowduucyada, iyo doodaha.
Waa awood awood leh, oo si buuxda loo qiyaasi karo, oo ah mashruuc horumarineed oo heer sare ah oo loogu talagalay kooxaha xirfadleyda ah. Halka isticmaaleyaasha waxbarashadda iyo horumariyeyaasha mashaariicda laga helo ilo furan ay ka helaan koontooyin bilaash ah. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud u soo dhoofsato keydka GitHub ee 6 tallaabo oo fudud, waxayna taageertaa isku-dhafka dhinac saddexaad. Waxay leedahay astaamo caan ah sida, dhuumaha Bitbucket, raadinta koodhka, codsiyada jiida, moodellada dejineed ee dabacsan, aragti kala duwan, muraayadaha casriga, raadinta arrimaha, iyo kuwo kale oo badan.
Waa il furan, awood leh, ammaan ah, hufan, muuqaal hodan ku ah, iyo barxad adag oo lagula tacaalo horumarinta barnaamijka softiweerka iyo howlaha nolosha. Dad badan, tani waa muran la’aan tirada koowaad ee beddelka GitHub, maadaama ay taageerto dhacdooyinka kooxeed, la socoshada arrinta, looxirmooyinka laxiriira arrimaha iyo arrimaha kooxda, dhaqdhaqaaqa arrimaha udhaxeeya mashaariicda, iyo inbadan. Waxa kale oo ay taageertaa raadinta waqtiga, aaladaha kala geddisan ee awoodda leh, iyo laamo iyo taaga la ilaaliyo, oo ka mid ah astaamo badan oo badan
Waa madal gebi ahaanba bilaash ah oo caan ah oo loogu talagalay dhismaha, maaraynta iyo iskaashiga mashaariicda barnaamijyada, oo ay dhistay Canonical, hal abuureyaasha Ubuntu Linux. Waxay leedahay waxyaabo ay ka mid yihiin koodhka martigelinta, dhismaha xirmada Ubuntu, iyo martigelinta raadinta cayayaanka, dib u eegista koodhka, liisaska dirista, iyo la socodka raadinta. Intaa waxaa dheer, Launchpad wuxuu taageeraa tarjumaadaha, raadinta jawaabta, iyo su'aalaha badanaa la isweydiiyo.
Waa barnaamij furan oo bilaash ah kobcinta iyo qaybinta barnaamijyada loo dhisay inay si gaar ah u martigeliso mashaariicda isha furan. Waxaa lagu martigeliyaa barnaamijka 'Apache Allura platform', waxayna taageertaa tiro kasta oo mashaariic shaqsi ah. Taasina waa sababta, waxaa loo arkaa inay tahay il furan furfurnaan bulsho oo loogu tala galay in lagu caawiyo mashaariicda isha furan sida ugu macquulsan loogu guuleysto. Awoodda weyn ee hadda jirta waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 430.000 oo mashruuc; 3,7 milyan oo isticmaaleyaal ah oo diiwaangashan, 35 milyan oo booqasho maalinle ah iyo in ka badan 4,5 milyan oo barnaamijyo soo degsasho ah maalintii.
Kale oo la yaqaan
Keydadka Meelaha Daruur
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan kuwan waxtar leh oo wax ku ool ah «Sitios de Alojamiento de Software Libre y Abierto» taas oo u oggolaanaysa dad badan inay horumariyaan, wax ku darsadaan ama ay iskaashadaan midba midka kale, si loo abuuro nidaamkeenna deegaanka ee hadda jira ee sii kordhaya, oo ah mid dan weyn iyo faa'iido u leh, «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » Goobaha Marti-gelinta Barnaamijka Bilaashka ah iyo Furan: Ugu wanaagsan 2020
Fur Hub: Goob ku habboon in la ogaado, lala socdo oo la isbarbardhigo ilaha furan